Tag: emayl api | Martech Zone
Sparkpost: Adeeg Bixinta Emailka ah ee Abkaaga ama Boggaaga
Axad, Disembar 10, 2017 Isniin, November 5, 2018 Douglas Karr
Mid ka mid ah fikradaha dambe ee dhisida degel ama codsi moobiil badanaa waa emayl. Horumariyayaashu waxay inta badan isticmaalaan howlaha emaylka madal si ay ugu diraan fariimo emayl ah oo fudud Hadday yihiin kuwo heer sare ah, xitaa waxay dhisi karaan shax yar oo HTML ah si ay u soo wacaan oo ay ugu diraan emayl ahaan. Xaddidnaanta tani waa fara badan - sida awoodda wax loo tebin karo oo loo cabbiri karo ayaa furan, dhagsiinno, iyo buunno. Sparkpost waxay dhistay madal ku habboon tan. E-mayllada la soo saaray - oo inta badan loo yaqaanno emails-ka wax kala iibsiga — ayaa ah farriimo
E-mayllada sida caadiga ah waxaa loo adeegsadaa suuq geynta waana fariin hal-to-badan ah. Warshadaha dhexdooda, tan waxaa si wanaagsan loogu yaqaannaa dufcad iyo qarax. Waqtiga ayaa leh cidda soo dirtay. Iimaylka la kiciyay wuu ka duwan yahay, isku darka sheybaarka gaarka ah iyo xogta isticmaalaha si loo soo diro farriin emayl marka dhacdo gaar ahi dhacdo. Dhacdadu waxay kicineysaa emaylka. E-mayllada la kiciyay waxaa toos loogu diraa nidaamka gadaal ama adeegsiga adeeg bixiyaha emaylka sida caadiga ah iyada oo loo marayo isdhexgalka API. Qaar
Jimco, Janaayo 25, 2013 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Isdhexgalku wuxuu noqonayaa qayb muhiim ah oo ku saabsan iibka iyo habka suuq geynta ee celceliska barnaamijka e-maylku si fudud kuma filna. Dadyowga sida Xaqa u leh Interactive waxay qaateen nidaamkooda otomatigga suuqgeynta waxayna si toos ah ugu dhisteen barxad ay ku leeyihiin sidaas darteed uma baahnid inaad iibsato ama aad dhexgasho iyo ESP. Ma ahan wax adag in dhab ahaan la sameeyo. Markii uu ku jahwareeray xaddidaadda adeegyada emaylka, Adam Small wuxuu adeegsaday wakiilo xawilaad waraaqo furan (MTAs)